Madaxweyne Qoorqoor oo si adag uga hadlay dagaalada ka socda Mudug iyo qaqabashada Alshabaab.
July 20, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (Galkacyo)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Mudane Axmed Abdi Kaariye ayaa magaalada Gaalkacyo kula tukaday qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo ee Xarunta gobolka Mudug.
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo salaadda ka dib hambalyada Ciidul Adxaa u diray dhamaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaanna shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo ay ku suganyihiin.
Mudane Qoorqoor ayaa waxa uu si gaar ah ugu hambalyeeyay qeybaha kala duwan ee Ciidamada qalabka sida ee howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ka wada deegaanada Galmudug, saga oo sheegay in ay ka gacan sarreeyaan cadowga kana guulkeeni doonaan.
Ugu dambayntiina madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu ugu baaqay dhamaan Dowladaha Xubnaha ka ah dowladda federalka ah ee Soomaaliya inay si isku mid ah uga qeyb noqdaan howlgalada lagu soo afjarayo Al-Shabaab.
wixii ku dilaaba waa iskumid hadaad shabaab ka baxsatid mandooriye khamri iyo sino(eedi) baadan ka baxsaneen dhaliyaradi somalia dagaal ayaa lagu hayaa wadaadkii wax sheegi laha waxaa la oran shabaab, oday dhaqmeedkii siyaasad ayaa wareerisay halkaasu ku hayaa nomacuntanto!dhalintii jamacdan kalintoodi waa gabeen ma qoran maqaalo wacyin gelinah,askariga iyo kan xafiska fadhiyee iyo tajirka waa walaalo doolar ayee dondoonin waxba kama gelin khamri,dawa dhacdayo cunta dhacday wajiraan wili dad fiicaan damir leh wase laga badan yahay
acday ayee keenayan cid controolsa maleh dadkii waxaa ku wada dhacday sonkor dhiig kar iyo cuduroxun sida kansarka warhooy waxas dibada laga keeno ha
cunin dhulkiina waxa ka baxa cuna digirta galayda haruuka yicibta